အသက် ၂၃ - ရက် ၆၀ - ED သည်သိသိသာသာတိုးတက်လာပြီး HOCD ၏အတွေးများပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပျော်မွေ့နေသည်ဟုခံစားရသည် - Your Brain On Porn
အသက် ၂၃ - ရက် ၆၀ - ED သည်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့ပြီး HOCD ၏အတွေးများပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါတကယ်ဘဝကိုပျော်မွေ့နေသလိုခံစားရတယ်
ကြိုတင်ကြာမြင့်စွာရေးသားခဲ့သောအတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်မည်သို့လုပ်နေသည်ကိုမျှဝေလို။ အခြားသူများကိုဆက်လက်သွားရန်သို့မဟုတ်ထွက်ရန်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါဟာတခြားလူတွေထက်စိတ်ခံစားမှုကင်းမဲ့မှုဒါမှမဟုတ်အကောင်းမြင်မှုနည်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကစူပါပါဝါတွေ၊ မိန်းကလေးသံလိုက်တွေကိုကတိပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ငါအရင်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုပျော်မွေ့စွာဖြတ်သန်းသွားလာရတာပိုကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုတွေ့နေရပါတယ်။
ပထမဦးစွာခြေလှမ်းများ: ငါလက်ျာဘက်တစ် relapse ပြီးနောက် reboot စတင်ယေဘုယျအားဖြင့်ငါအပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲနောက်တဖန်စတင်ရန်ပျောက်မှေးမှိန်မကုန်မှီတိုင်အောင်ရက်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းလိမ့်မယ်။ တခါတရံငါ porn အချို့ထက်ပိုသုံးပြီးစောင့်ရှောက်ဖို့ relapse ၏အားသာချက်ယူမယ်လို့ငါအောက်ခြေထိမိသည့်အခါငါသည်ဤနောက်တဖန်ပြန်လည် reboot လုပ် start ထို့နောက်အလုံအလောက်ကြီးနှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှပြောလိမ့်မယ်။
ဤအချိန်, ငါပြန်ရောက်သွားတယ်ယခုအချိန်တွင်, ငါသညျငါ့ reboot စတင်လိမ့်မည်ဟုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့စိတ်ကိုအတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်ဤအများကြီးကူညီပေးခဲ့သည်။
တကယ်ကငါ့စိတ်ထဲသတ်မှတ်ထားကြောင်းနောက်ထပ်အရာငါတက္ကသိုလ်ပြီးအောင်အကြောင်းကိုခဲ့ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပဲ, ငါ Academic ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်တကယ်ဂုဏ်ယူမဟုတ်ခဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခံခဲ့ရသော်လည်း။ တစ်ဦးညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူဖြစ်ခြင်းငါအများကြီးငါ့ကိုဆင်းကိုင်ထားခဲ့တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။ ငါကိုငါသိမြင်၏ ငါသည်ငါ၏အသက်တာ၌အမှုအရာအများကြီးအကြောင်းကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ပေမယ့်ညစ်ညမ်းသူအပေါငျးတို့အမှုအရာထဖုံးအုပ်ခဲ့သည်။ မအောင်မြင်သောပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းမှု၏စွမ်းအားကိုမြင်ပြီး“ ဒီစွဲလမ်းမှုမှရှောင် ထွက်၍ မရပါက” ဤအတွေးကကျွန်ုပ်ကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောသေးငယ်သောအကျပ်အတည်းတစ်ခုသို့အမှန်တကယ်ကြောက်ရွံ့စေခဲ့သည်။
ဤတွင်ပြောင်းလဲ3အရာဖြစ်ကြ၏:
1 / 3)
အထူး reboot (20-25 ရက်ပေါင်း) ၏ပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးအရက်ကိုငါ့စိတ်ထဲအရာတန်ချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကြံအစည်နှင့်အလွန်လူစည်ကားခဲ့သည်။ ငါ porn နှင့်အခြားစိုးရိမ်ပူပန်ထုတ်လုပ်အတွေးအကြောင်းကိုတစ်ခုခုအတှေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့အခါတိုင်းငါ့ကိုနှောင့်အယှက်မှစဉ်ဆက်မပြတ်ရောက်လာတယ်။
တှေးတောဆငျခွ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားခြင်းပါ၊ ပထမဆုံးရက်တွေအတွက် Headspace ကိုသုံးပြီး၊ ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကို (ကတရားမ ၀ င်ဘူး၊ မလုပ်နဲ့) torrented လုပ်တယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့အတွေးတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်တာကောင်းပေမယ့်၊ ဤကဲ့သို့သော program တစ်ခုဖြင့်ထပ်မံစတင်ရန်။ အားကစားရုံ: အားကစားခန်းမမှ Going, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပြေးဘို့မယ်ငါ၏အကြံအစည်ကိုဆင်းတိတ်ဆိတ်ငါ့ကိုထုတ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါအများအားဖြင့်ညဥ့်ပါသို့မဟုတ်မွန်းလွဲပိုင်း၌ငါ့ရမ္မက်အများစုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ 4pm ကနေအားကစားရုံသွားနောက်ပိုင်းတွင်ငါ့ကိုအများဆုံးစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ထွက်လာပါတယ်ကာလ၌အချို့သောတိတ်ဆိတ်စိတ်ကိုအချိန်ကိုပေး၏။
ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစတင်တဲ့အခါကျွန်တော့် ဦး ခေါင်းဘယ်လောက်ရှုပ်နေသလဲဆိုတာသိလိုက်တယ်။ ခြားနားချက်ကကြီးမားတယ်၊ အခုငါအများစုမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်သဘောထားရှိတယ်။ ငါပြproblemနာတစ်ခုချင်းစီကိုတစ် ဦး ချင်းစီအာရုံစိုက်ပြီးစဉ်းစားခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ငါမဖြေရှင်းနိုင်လျှင်အနည်းဆုံးငါဖြေရှင်းနိုင်မည့်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်အကြှနျုပျ၏ နေ့စဉ်ပြဿနာများကိုငါ့ကိုကျော်ပါဝါအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါအရင်ကလိုစိတ်ဖိစီးမှုခံစားခဲ့ရသလိုခံစားမှုမခံစားရဘူး၊ အိပ်ယာထဲကနေခုန်ထွက်ပြီးရုန်းကန်စရာများစွာမရှိဘဲငါ့နေ့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ခွန်အားပိုရှိလာတယ် ဟုတ်ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာ၊ အလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ညစ်ညမ်းတာကိုမဆက်ဆံဘူး။ သင်၏စိတ်ကိုရက်ပေါင်း ၂၀ သို့မဟုတ် ၃၀ ပေး၍ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်တွေးတောဆင်ခြင်ပြီးအလုံအလောက်လေ့ကျင့်ပါ။
မီ: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနီးပါးရုန်းကန်ခဲ့အော်ဂဇင်ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ED ။
ငါ reboot ၏ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ရက် (20 ရက်) တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ပါဘူးဒါပေမယ့်ငါအခါအားလျော်စွာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေစတင်ခဲ့, အစဉ်မပြတ်ငါအမြဲတမ်းခက်ခဲစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါအော်ဂဇင်နိုင်ဘူးသည့်အခါအလွန်စိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခါတစ်ရံ ED ဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ငါခန့်မှန်း flatline တစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ။ ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူထွက်သွားသောအခါဤမလုံခြုံမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ငါလိင်ဆက်ဆံရန်ခဲယဉ်းသည်၊ သူမစိုက်ထူမည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ကို 'မျှော်လင့်ထားသည့်' ကြောင့်ငါအမြဲတမ်းအပြည့်အဝစိုက်ထူရန်လိုအပ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုပြောကြားခဲ့သည်။
အတွင်းမှာ: ကျွန်မအပေါ်လှည့်လာပြီးကျွန်မတို့မပါဘဲ masturbating ခဲ့သဘောပေါက်။ ငါ masturbated နေချိန်မှာငါထှတျအထိပျရရန်အလို့ငှာ၌ငါ၏ဦးခေါင်း၌ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များနေရာခဲ့ရပြီးဒီရုန်းကန်ခဲ့ပါတယ်။ အော်ဂဇင်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲလက်လှမ်းမှီဖို့အလွန်ခက်ခဲဇာတ်စင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီကိုရှင်းပြရန်ခက်ခဲဖြစ်ပေမယ့်စခွေငျးငှါ: ငါ porn မှငါ့ကိုအဖွင်သောအရာဖြစ်ကြ၏ကြောင်းကိုသိမြင် မဟုတ် စစ်မှန်သောဘဝပေါ်မှာငါ့ကိုဖွင့်သောတူညီသူတွေကို။
Reboot ကသူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစတင်ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ“ ပုံရိပ်ရုပ်ပုံများ” ဟာသူ့ရဲ့စွမ်းအားကိုဆုံးရှုံးသွားလို့ငါစတင်ခဲ့တယ် ငါမပြုမီခဲ့ကြောင်းအမှန်တကယ်လိင်အချိန်လေးမှ masturbating။ ငါဖြတ်သန်းသွားသောတကယ့်အတွေ့အကြုံများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ။ အမြဲတမ်းတော့မလွယ်ကူလှပါဘူး
အားကစားခန်းမမှ Going ငါ့ကိုပိုပြီးမထိုက်မတန်နှင့်ထို့ထက် ပို. အရေးကြီးသည်မှာပိုပြီးသတိငါ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဖြစ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဗတ်ငါဆပ်ပြာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်စဉ်နှင့် ငါ့ကိုယ်တွေ့ကြုံခံစားထိုသို့ခံစားရပုံကိုကမထိဖို့ဓာတ်ပြုပြီးဘယ်လိုကြည့်ရှုရန်ကြိုးစား။ ငါရိုးရှင်းစွာအကြှနျုပျ၏လိင်တံနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မယ်လို့ခင်မှာယခုငါဘယ်မှာနှင့်မည်သို့ငါထိမိခံရဖို့ကိုကြိုက်၏အယူအဆတခုရှိသည်။ ငါသည်ဤသည်လည်းငါ၏အလှည့်-ons တွေကို rewire စေရန်ကူညီပေးသည်ပုံပါဘဲ။
NOW က: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကပိုပျြောမှေ့စနှင့်မောင်းနှင်လျော့နည်းရည်မှန်းချက်ခံစားရပါတယ်။
ငါ porn နှင့်လိင်ကွဲပြားခြားနားသောသားရဲနှစ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ်။ porn သည်အမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောကြောင့်လက်တွေ့မကျသည့်မျှော်လင့်ချက်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယခုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ခြင်းသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကိုယ်ခန္ဓာသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုစဉ်းစားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြားသူတစ် ဦး နှင့်စိတ်ကူးကြည့်ခြင်း၊ ယုံကြည်မှုခံစားခြင်းနှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ပျော်ရွှင်စေလိုသောဆန္ဒအကြောင်းဖြစ်သည်။ ငါနှင့်အတူရုန်းကန်နေဆဲ: ED နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှစ်ခုလုံးအများကြီးမှေးမှိန်ပါပြီ။ ငါသည်အခြားသူတစ် ဦး နှင့်အနီးအဝေးဖြစ်ရန်စိတ်ကူးယဉ်သည်။ ရင်းနှီးသောနှင့်ယုံကြည်မှုခံစားရတယ်။ အော်ဂဇင်ရှိခြင်းသည်ဤအရာအားလုံး၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အဓိကရည်မှန်းချက်မဟုတ်တော့ပါ။ ငါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခံစားရတယ်၊ ငါဟာတကယ်တမ်းငါ့ကိုဘာဖြစ်နေတာလဲသိပြီးငါတစ်ယောက်ယောက်ကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း (အရင်ကစိုးရိမ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအရာ) သည်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်နေသောအရာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
NoFap လူအများကြီးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဆန့်ကျင်နေကြသည်ပေမယ့်။ ကြှနျတေျာ့အမှု၌ငါကငါ့ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုငါ့ယုံကြည်ချက်ကိုအများကြီးပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ကအကြောင်းပိုမိုယုံကြည်မှုဖြစ်ကကူညီပေးခဲ့ခံစားရတယ်။ ငါကပိုပြီးချိတ်ဆက်ခံစားရတယ်။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတစ်ဦးအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလမ်းအတွက်ချိတ်ဆက်။
ငါတစ်ပတ်မှနှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ် ၃ ကြိမ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း။ ငါလုပ်ချင်တဲ့သဘာဝဆန္ဒရှိတယ်၊ အထူးသဖြင့်ငါနဲ့အတူသွားမယ့်မိန်းကလေးအကြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါ။
မီ: ငါ့အညစ်ညမ်းစွဲများကြောင့်ရှက် Feeling နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို။
ယခု: ငါဖြစ်လာနေပါတယ်တဲ့သူတွေအကြောင်းဂုဏ်ယူပျော်ရွှင် Feeling ။
ဒီတစ်ခုကသိသာထင်ရှားပေမယ့်အရေးကြီးတယ်။ ငါစွဲနေတဲ့ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း ငါအရူးတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရပြီးအရေးအကြီးဆုံးကတော့ငါပျော်မွေ့မယ်လို့သိတဲ့ဘဝတစ်ခုခုမှာပျောက်ဆုံးနေတာနဲ့တူတယ်။
ငါလိုခငျြအကြင်သူသည်နိုင်ပါတယ်တူသော porn မရှိရင်ငါခံစားရတယ်။ အကြှနျုပျ၏ရုန်းကန်မှုများကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျသူတို့ကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ ငါတစ်ခုခုအောင်မြင်ရန်ဆိုလျှင်, ငါနှင့်မညစ်ညမ်းတို့၏အကြံအစည်အားဖြင့်ချဆွဲငင်ခံရအကြောင်းကိုပျော်ရွှင်စေနိုင်ပါတယ်။
ယခုတွင်ငါသည်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်အောင်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေသည်။ နေ့တိုင်းအလုပ်ကြိုးစား။ ငါ၌အလားအလာများစွာရှိသည်ကိုသဘောပေါက်ပြီး၎င်းကိုနေ့တိုင်းအသုံးချရန်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။
ငါအသစ်ကတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အခါငါဖုံးကွယ်ဖို့ဘာမျှမရှိသည်ကဲ့သို့, ကကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ နှင့်ဤအံ့သြဖွယ်ခံစားရ၏။
ငါစကားစမြည်ပြောဖို့ပိုပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်၊ ငါပြောတာကိုပိုပြီးသေချာတယ်၊ ငါဘာမှပြောစရာမရှိရင်တိတ်ဆိတ်စွာနေဖို့လည်းမလွယ်ဘူး။ အဲဒါကကျွန်မကိုယုံကြည်မှုရှိစေတယ်။
မိန်းကလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းကသူတို့ကိုရိုက်နှက်တာနဲ့လိင်ဆက်ဆံတာကိုမစဉ်းစားတော့ဘူး။ ငါကသူတို့ကိုတကယ်သိကျွမ်းဖို့အထူးတာရှည်ခံနိုင်ပြီးသူတို့အပေါ်အထူးစွဲမှတ်စေဖို့ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအေးအေးဆေးဆေးနေပြီးလိင်မဆန်ဘူးဆိုတာကငါ့ကိုအတော်အတန်သက်သာစေပါတယ်။
အခြားလူများနှင့်ကျွန်ုပ်၏မလုံခြုံမှုများကိုပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာပြီးအခြားသူများ၏မလုံခြုံမှုများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုအကြောင်းအရာများစွာအကြောင်းပြောဆိုရန်ကူညီပေးပြီးကောင်းမွန်သောစကားပြောဆိုမှုများကိုရရှိနိုင်စေပြီး၊ ကျွန်ုပ်ကိုကူညီခြင်းနှင့်ဘ ၀ တွင်ရုန်းကန်နေရသည့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမှအခြားသူများကိုကူညီရာရောက်သည်။
HOCD နှင့်ရိုးရိုးအတှေး: ငါ့မှာဘဝတစ်လျှောက်လုံးနဲ့လိင်တူချစ်သူတွေရှေ့မှာလိင်တူချစ်သူတွေအများကြီးကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတယ်။ အခုတော်တော်များများမှေးမှိန်သွားပြီးငါအရင်ကထက်ရည်းစားထားဖို့ပိုပြီးအာရုံစိုက်မိတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်ကျွန်ုပ်ကိုဖိအားမပေးတော့ပါ။ သူတို့ပေါ်လာရင်သူတို့ထွက်သွားတဲ့အထိခဏလေးနေခွင့်ပေးပါ။
ရှည်လျားတနေ့လုံးတက်ကြွ Beကျောင်း၊ အလုပ်၊ အားကစားရုံစတာတွေအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးသေချာအောင်လုပ်ပါ။ မင်းကအပြောင်းအလဲကောင်းတစ်ခုလုပ်နေတာကြောင့်သင်ဟာပင်ပန်းပြီးအထူးဂုဏ်ယူလိမ့်မယ်။ တစ်နေကုန်အိမ်မှာနေဖို့၊ နည်းနည်းလေးလုပ်တာ၊ အချိန်ဆွဲတာ၊ တစ်ခုခုလုပ်တာ၊ အိမ်ကိုပင်ပန်းတာ၊
အစပျိုးခြင်း generate သမျှသောဆိုဒ်များကိုပိတ်ဆို့:
ငါ "Block Site" ဟုခေါ်သော chrome extension ကိုအသုံးပြုပြီး Safari အတွက်အချိန်ဖြုန်းတီးသည်။ ငါ Tumblr (i u tumblr ကိုလွမ်းတယ်) ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါ google.com ကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်။ ငါသည်ငါ့ကွန်ပျူတာကနေရှိသမျှသည်အခြား browser များဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့စာရင်းထဲမှ porn ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများအများကြီးထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ မှတ်ဥာဏ်ကနေဘယ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာဘယ်လောက်သိတယ်ဆိုတာကြည့်ရတာစိတ်ဝင်စားစရာပဲ။
သင့်ရဲ့ခလုတ်ဇုန်ထဲကနေဝေးနေပါ။ ငါ့အဘို့ငါ့အိမ်ကိုငါအချိန်ကြာမြင့်စွာနေစဉ်အတွင်းတစ်ဦးတည်းကြီးဘယ်မှာငါအစပျိုးခြင်းအများကြီးမှအကြှနျုပျကိုဦးဆောင်မယ့်တွေအများကြီး procrastinated နေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အိမ်၏စာကြည့်တိုက်မှာအိမ်စာလုပ်နေငါ့အိမျကနေကွယ်ပျောက်နေ၏။ , အလုပ်မလုပ်ထံသို့ သွား. ငါ့အိမျမှာပြောင်းလဲသွားတယ်နှင့်အားကစားရုံမှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ငါတကယ်ပင်ပန်းခံစားတဲ့အခါငါရေချိုးခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ခြင်းယူအိမ်ပြန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
အခြားလူများနှင့်အတူ Be: အခြားသူများနှင့်ဖြစ်ခြင်းတွေအများကြီးငါ့ကိုထုတ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အထူးသညျအခွားစုံတွဲများအတူ။ ဒါကြောင့်ပဲလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ဘာမျှမလုပ်ပေးခဲ့လျှင်ပင်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောဘဝပုံစံများနှင့် porn နှင့်ဆက်စပ်သောကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအချိန်ကိုဖြုန်းသို့မဟုတ်ခံစား၏နည်းလမ်းတွေကြည့်ဖို့ငါ့ကိုထုတ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ Plus အားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအချိန်ဖြုန်းရန်၎င်း၏အံ့သြဖွယ်။
ဂိမ်း: ၎င်းသည်အထိခိုက်မခံသောအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုနှင့်အခြားတစ်ခုကိုလွယ်ကူစွာအစားထိုးနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်စိုးရိမ်ပူပန်နေချိန်မှာ Call of Duty (သို့) Battlefield ကိုနာရီဝက်လောက်ကစားခဲ့ရတယ်။ ဒါကစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့နေ့နောက်ပိုင်းမှာငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ၊
သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်: စားကောင်းသောအမှုအရာတို့ကိုရှာဖွေခြင်းထွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ငါ့အအားလပ်ချိန်မှာအချိန်ကို အသုံးပြု. အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ အကယ်၍ သင်သည်ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုပြီးအချိန်ဆွဲနေလျှင်ကွန်ပြူတာမှထွက်ခွာပါ။ တစ်ခုခုစားပါ၊ မိနစ် ၂၀ အိပ်ပါ၊ လမ်းလျှောက်ပါစသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်အချိန်ဆွဲခြင်းသည်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအတွေးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့လျှင်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဟုခံစားရသည်။
ဒါကအခုအချိန်မှာတော့အဲဒါကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီနေရာကိုသွားဖို့ရှည်လျားတဲ့လမ်းရှည်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ့အနာဂတ်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ နှင့်အမျှအမြဲကြိုက်လူတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် @MrGeonov နှင့် @TheSpaniardDude ငါ့ကိုနေ့တိုင်းထောက်ခံပါတယ်။
LINK - 60 Days - ဒီကိုငါဘယ်လိုရောက်ခဲ့လဲ။ ED တိုးတက်မှု !!
နောက်ဆုံးထွက် - 150 Days - ခေါင်းကိုအစားထိုးသလိုခံစားရတယ်
ကောင်းပြီ၊ နောက်ဘာရေးရမလဲစဉ်းစားနေတယ်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ ကျော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငါ့ဘဝဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါကဒီလိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးကိုပထမဆုံးအကြိမ်ငါခံစားရခြင်းပဲလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။
ယခုအပတ်ကျွန်ုပ်သည်လေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်ကြာသပတေးနေ့နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဖိုင်နယ် ၂ ပွဲကိုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။ အခုတော့ငါဗိသုကာတစ်ယောက်ပါ။
ဤသည်မှာပြီးခဲ့သည့်လကကျွန်မကိုတရားဝင်ငါသည်ငါ့မိဘတွေကိုချိန်းတွေ့ခဲ့မိန်းကလေး, ငါ့မိသားစု၏ကျန်အပေါင်းတို့နှင့်ငါ၏အဆွေမိတ်ဆက်ပေးသည်။ အခုတော့ကျွန်မရဲ့ရည်းစား, အစဉ်အမြဲငါရှိခဲ့ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းသူမ၏မခေါ်နိုင်ပါ။
ငါ၌လိင်များစွာရှိသည်။ ငါတကယ်ယုံကြည်သူတစ် ဦး နှင့်၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်တစ် ဦး နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်ပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လှပသည်။ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်နေ့တိုင်းတိုးတက်သည်။
ကျွန်တော့်ဆီကိုလူအများလာပြီးသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာပြောပြပြီးငါဟာဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့၊ သူတို့ကိုငါဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်၊ သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုငါဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆိုတာပြောပြဖို့သတ္တိလည်းရှိတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာ၊ စိတ်ခံစားမှုအကောင်းနှင့်အဆိုးနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုခံစားနေရသည်။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာကျင်မှုဖြစ်စေတာအံ့သြစရာပဲ။ နှစ် ဦး စလုံးစိတ်ခံစားမှုယခင်ကထက်တောက်ပလောင်ကျွမ်း။ အလှဆုံးလမ်းအတွက်။
အလွန်တင်းမာသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကွန်ပျူတာဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်မေ့လျော့ရန်အိပ်ခန်းနှင့်ကျွန်ုပ်အိပ်ခန်းထဲမ ၀ င်မီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်တင်းမာမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားနေရသည်၊ ကျွန်ုပ်ခံစားရမည့်အရာများနှင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်။
ဘဝကိုဖြတ်သန်းခြင်းသည် rollercoaster တစ်ခုနှင့်တူသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရစင်ကြယ်တယ် ကျွန်တော့်ခံစားချက်တွေကအရင်ကထက်ပိုခိုင်မာလာတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်တယ်လို့ခံစားရတယ်
ကျွန်ုပ်ဘဝကိုပြုပြင်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခု၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုမည်သို့ရပ်တန့်ရမည်၊ စိတ်ကိုတိတ်ဆိတ်အောင်မည်သို့စဉ်းစားရမည်ကိုမစဉ်းစားမီ၊ “ နောက်နှစ်တစ်နှစ်ပျံသန်းတော့မည့်နှစ်” သည်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ယခု ၂၀၁၇ သည်ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးနှစ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောရ။ ကျွန်ုပ်ဂုဏ်ယူမိသည်။
ငါသည်ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်စိတ်ချမှုခံစားရနှင့်ငါ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ပတ်သက်. ယခုငါဘယ်သူ့ကိုမှများ၏ရှေ့မှောက်၌နီးပါးအဝတ်အချည်းစည်းဖြစ်ကြောင့်နှင့် ပတ်သက်. သတိမဖြစ်နိုင်ပါ။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငါဘာအကြောင်း porn ကိုမေ့နေတာလဲ။ ငါသတိရတယ်၊ တစ်ခါတစ်ရံတောင့်တသော်လည်း၊ ထိုအတွေးများသည်အလွန်အားနည်းစွာပေါက်ကွဲသဖြင့်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားခဲ့ရာကိုနားမလည်နိုင်။
ငါနာရီတိုင်းစကားပြောနိုင်ပေမယ့်သိပ်များလွန်းတယ် အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်ဘဝ၏မည်မျှပြောင်းလဲသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်နိုင်ပါ။ ရက်ပေါင်း ၁၅၀ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမပါဘဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်အသိအမှတ်မပြုနိုင်တော့ပါ ငါမှန်ထဲမှာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဂုဏ်ယူခံစားရတယ်။
ကံကောင်းပါစေလူတိုင်းအတွက်, သင်အကောင်းဆုံးအလိုရှိ၏။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ္စမတ်နှင့်မင်္ဂလာနှစ်သစ်။